Ntuziaka Dị Mfe Site na Semalt Nke ahụ ga-eme ka WordPress Site dị ka Ntụkwasị Obi Dị ka Omume
Intanet na-enye ọtụtụ ndị ohere na-agba ọsọ ọtụtụweebụsaịtị e-commerce iji mezuo mgbalị ha. Dị ka ọmụmaatụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyocha usoro azụmahịa, nke na-abịa na ọtụtụelu na ala. Dịka ọmụmaatụ, saịtị dị n'okpuru ndị nledo. Ndị omekome na-emebi cyber nche site na ọtụtụ ụzọ, nke na-enyereha ka ha nweta ụlọ ahịa dị iche iche nke e-azụ ahịa na-enweghị ikike, yana ịhapụ data ndị ahịa dị mkpa - automotive accessory. Iji nọrọ jụụihe egwu cyber ndị a, ịkwesịrị ịghọta otú ha si arụ ọrụ.
WordPress bụ usoro nchịkọta ọdịnaya kachasị mma. Dị ka ihe atụ, WordPressnwere ihe dịka 24% niile internet weebụsaịtị zuru ụwa ọnụ. Ha nwere ọpụpụ a n'ihi ọtụtụ ihe, nke yiri ka ha na-akwado ụdị ahịa ha.WordPress nwere ọtụtụ ngwaọrụ na plugins nke nyere ndị ọrụ aka ịme ọtụtụ usoro SEO na ịntanetị. Otú ọ dị, ọtụtụ mmadụeji WordPress ha website mkpa, hackers na ndị ọzọ na cyber egwu ịchọta WordPress a gold mine oke. A maara WordPress na ngwa ngwa, nkeeme ka hacking ya ma ọ bụ ụfọdụ nke plugins mfe. Onye na-egwu ihe nwere ike ịnweta ọtụtụ ozi site na saịtị ọ bụla n'enweghị nkwenye nke onye nwe ya.
Oliver King, nke Ọkachamara Gbanwee Ọrụ Ndị Ahịa, kpughere ndụmọdụ ndị a iji bulie nchedo WordPress mgbe ị na-eme saịtị:
Nọrọnụ na ụbọchị
Iji nyocha virus nwere nchedo nwere ike ịhapụ kọmputa gị n'enweghị ọtụtụ ikpuru na nje..Ọ dị mkpa ijide n'aka na ngwanrọ ahụ na akụrụngwa gị bụ mmemme kwesịrị ekwesị ma hụ na ha na-arụ ezigbo ọrụ ha. Bikohichapụ ozugbo usoro obi ọ bụla nke ị na-amaghị. Ụdị ihe ndị ahụ na-emetụtakwa maka nchọgharị. Ekwela ka ihe obulamgbakwunye na-agba ọsọ na ihe nchọgharị gị. Ha nwere ike ịnwe ederede, nke na-agbanwe mgbanwe na kọmputa gị.
Zere spam na phishing
Kedula njikọ ọ bụla na ozi-e spam. Njikọ ndị a na-eme ụfọdụ n'ime obe nkịtịmkpesa saịtị. Ha nwekwara ike ịnwe mgbakwụnye, nke nwere Trojans. Otu ụzọ na-azụ ahịa ndị ahịa na-edekarị ndepụta na aakwukwo okwu, nke nwere Trojans. Ka onye na-enweta obi ụtọ na-emepe faịlụ ahụ iji lelee ihe ndị dị na ya, ọ na-ekpughe nje ahụ dumkọmputa. Ọtụtụ ndị na-ahapụ ozi bara uru n'ụzọ dị otú a. Okwuntughe nwere ike imebi ọtụtụ azụmahịa aghụghọdị ka ego laundering ego.
Mgbe anyị na-emepụta ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ, onye ọrụ ahụmahụ, nakwa ihe mgbaru ọsọ njedebe, na-abụkarịnzube anyị. Ọtụtụ ndị mmepe weebụsaịtị na-elekwasị anya na SEO ma na-eme ka onye ahịa jiri usoro ahụ zuo ahia. Otú ọ dị, anyị anaghị adabana a hacker n'uche. N'ihi ya, e nwere ihe karịrị 90987 mbanye anataghị ikike ọgụ na-eme kwa nkeji n'elu WordPress ngalaba. Ọ dị mkpamụta usoro a yana ime ka ebe nrụọrụ weebụ anyị dị nchebe na mbanye anataghị ikike. Ị nwere ike ime ka gị na saịtị na-enwe nchebe nke dị mfe WordPress hacksdị ka ntinye ntinye ederede yana nyocha ndị ọzọ mbanye anataghị ikike na-eji ntuziaka a. Nche nke ebe nrụọrụ weebụ gị na nke ndị ahịa gị nwere ike ịnọgidena nlele. Ọzọkwa, ebe nrụọrụ weebụ dị nchebe na-arụ ọrụ ọma na SERPs na-eme ka SEO gị na ahịa gị na-amị mkpụrụ.